အမျိုးသမီးတွေကို အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းစေတဲ့ ဟော်မုန်း (၆)မျိုး - Lifestyle Myanmar
အမျိုးသမီးတွေကို အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းစေတဲ့ ဟော်မုန်း (၆)မျိုး
ဟော်မုန်းအမျိုးအစားက ၁၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဟော်မုန်းအမျိုးမျိုးက လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ အချို့ဟော်မုန်းများသည် အထူးအင်္ဂါများကိုအရေးကြီးသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်စေ၍ ကျန်ဟော်မုန်းများကမူ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု လုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
တချို့ဟော်မုန်းတွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့နေစဉ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဟော်မုန်းက အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ အပျိုဖော်ဝင်မယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှအပအတွက် ဒီဟော်မုန်း ၆မျိုးက အရေးပါတယ်။ သူတို့က ကျွနု်ပ်တို့အသားအရေရဲ့ elasticityကို အထောက်အကူပြုပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကို စောင့်ထိန်းပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် တခါတရံမှာ ကျွနု်ပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဖောက်ပြန်လာပါတယ်။ ဟော်မုန်းအဆင့်တွေ လျော့ကျလာပြီး အရွယ်မတိုင်မီ စတင်အိုမင်းလာပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ ဟော်မုန်းမျှတမှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိလာတာကြောင့်ပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ဟော်မုန်းတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအဆင့်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ ဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ Estrogen (အီစ႐ိုဂ်င္)
အီစရိုဂျင်က အီလက်စတင်နှင့် ကော်လာဂျင်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ fibroblast ဆဲလ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းအဆင့် လျော့ကျလာတဲ့အခါ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာတာ၊ ဘဲဥပုံမျက်နှာက မညီမညာဖြစ်လာတာ၊ ရင်သားတွေ လျော့ရဲရဲဖြစ်လာတာ ကြုံရပါတယ်။ အီစရိုဂျင်အဆင့် လျော့ကျလာရင် အရေပြားနှင့်ပတ်သတ်ယုံသာမက ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း မြန်မြန်အရွယ်ကျလာပါတယ်။
အစားအစာ- ပဲပုပ်အခြေခံထားတဲ့ တို့ဖူး၊ ပဲနို့၊ ဆန်လုံးညို၊ နှမ်းကြတ်စေ့၊ လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွတ်များနှင့် အသီးအနှံများကို စားသုံးရပါမယ်။ အသား စားသောက်ကုန်တွေက အီစရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို နှိပ်ကွပ်တာကြောင့် တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်း စားသုံးမှုကို လျှော့ချတာ ကောင်းတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။
အလှကုန်- phytoestrogens ပါဝင်တဲ့ အထူးခရမ်တွေ။ ဥပမာ- နွယ်ချိုမြစ်နဲ့ ခရမ်တွေ၊ ဆီရမ်တွေက ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသော အင်တီအောက်ဆီဒင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ liquiritigenin ပါဝင်တာကြောင့် အိုမင်းမှုကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။
၂။ ကြီးထွားဟော်မုန်း (somatotropin)
ကြီးထွားဟော်မုန်းအဆင့် လျော့ကျလာတဲ့အခါ ကြွက်သားတွေမှာ အဆီလျော့နည်းပြီး အရေးအကြောင်းတွေ များစွာ စတင်ပေါ်လာပါတယ်။ စိတခံစားမှုကလည်း ဆိုးရွားသွားပြီး သည်းခံနိုင်ရည်က လျော့နည်းသွားပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်အနုပညာရှင်များဟာ ကြီးထွားဟော်မုန်းကို မကြာခဏထိုးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းက ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနဲ့ အရိုးတွေ ကြီးထွားမှုကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းအဆင့်ကို သဘာဝအတိုင်း ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ?
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု- အလေးမခြင်း နှင့်အတူ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် တစ်နာရီကို 2.5မိုင် – 3.5မိုင်နှုန်း ဖြင့် လမ်းလျှောက်ပါ။ အပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု- ချွေးထုတ်ခန်းသွားတာ သို့မဟုတ် ကြီးထွားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ contrast showerလို့ခေါ်တဲ့ ရေပူရေအေးချိုးပေးခြင်း။
၃။ DHEA (dehydroepiandrosterone) ေဟာ္မုန္း
DHEAဆိုတာ အိုမင်းခြင်းကို ဆန်ကျင့်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုအရာကို ကျွနု်ပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်က အသက် ၃၀အထိသာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကြွက်သားထုထည် စတင်လျော့ကျလာပြီးနောက် vessels တွေဟာ ပိုပြီးကျွတ်ဆတ်လာသလို အရေပြားဟာလည်း ၎င်းရဲ့ elasticity လျော့ကျလာပါတယ်။
၎င်းရဲ့အဆင့်ကို သဘာဝအတိုင်း ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ?
သင့်အစားအသောက်ထဲမှာ ကျန်းမာတဲ့ အဆီတွေထည့်သွင်းပါ။ သူတို့ထဲကမှ DHEA ကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ အခွံမာသီးများ၊ အစေ့အဆန်များ၊ ဖက်တီးငါးများ၊နှင့် ထောပတ်သီးများမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ polyunsaturated ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
မနက်စာအတွက် ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်ကို စားပါ။ ပရိုတိန်းဓါတ်အစားအစာများက စိတ်အပြောင်းအလဲများကို ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ပေးပြီး တနေ့တာလုံးရဲ့ အစမှာ ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
၄။ မယ်လတိုနင် ဟော်မုန်း
မယ်လတိုနင်က ကျွန်တော်တိုရဲ့နေ့စဉ် rhythms ကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားယူဖို့အချိန်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားပေးပါတယ်။ ဆဲလ်သက်တမ်းတိုးဖြစ်စဉ်အားလုံးက အိပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ပြီး ဒါက အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရင် လူတွေမှာ အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းခြင်းကို စတင်ကြုံရပါတယ်။ မယ်လတိုနင်ကင်းမဲ့ခြင်းက အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်လာတာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာနဲ့ ရောင်ခြယ်အစက်အပြောက်တွေ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အစားအစာ- မယ်လတိုနင်က ငှက်ပျောသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆန်နဲ့ ပြောင်းတို့မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အရက်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ကဖိန်းဓါတ်တွေက မယ်လတိုနင်ဟော်မုန်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သူတို့ကို သောက်သုံးတဲ့အခါ ဒီဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လုပ်ခြင်းက ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ beta blockers, hypnotics, နဲ့ anti-inflammatories ကဲ့သို့သော တချို့ဆေးတွေမှာ တူညီတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
ဖြည့်စွက်စာများ- မယ်လတိုနင်ကို ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကျွမ်းကျင်သူများက အသက် ၃၅နှစ်ကျော်လာရင် မယ်လတိုနင်ကင်းမဲ့မှုကို restore လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြည့်စွက်စာတွေ မှီဝဲမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့လိုကြောင်း သတိရပါ။
၅။ ကော်တီဇော (Cortisol) ဟော်မုန်း
Cortisol လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းအဆင့် မြင့်မားခြင်းက အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းစေပါတယ်။ အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး အဖက်အဖတ်ဖြစ်လာတာ၊ အရေးအကြောင်းတွေ များလာတာ၊ အဆီပြန်ပြီးဝက်ခြံတွေ ဖြစ်လာတာ၊ မျက်နှာအသားရောင် ဖြူလာတာကနေ သိသာထင်ရှားတဲ့ Cortisol ရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုက အရေပြားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းက ကော်လာဂျင်ဖိုင်ဘာတွေကို ဖြိုဖျက်ပေးပြီး အသားအရေပျော့တွဲမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် cortisol ရဲ့အဆင့်ကို ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ?
ရေလုံလောက်စွာသောက်ပါ- ရေဓါတ်အနည်းငယ် ခန်းခြောက်ရင်တောင် ဒီဟော်မုန်းအဆင့်က တိုးစေပါတယ်။ ရေတစ်ဖန်ခွက်က သင့်ကို relax ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
သီချင်းကောင်းကောင်းနားထောင်ပါ- သိပ္ပံပညာရှင်များက ဂီတကုထုံးဟာ စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကို လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရားထိုင်ခြင်းကလည်း ဆေးမသောက်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ cortisol အဆင့်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
၆။ အင်ဆူလင် (Insulin) ဟော်မုန်း
အင်ဆူလင်က သွေးထဲမှာ ဂလူးကို့စ်အဆင့်ကို တိုးစေပြီး ထိန်းချုပ်မှုထဲက ထွက်သွားတဲ့အခါတိုင်း အရေပြားပေါ်မှာ အိုမင်ခြင်းအစောပိုင်းလက္ခဏာများကို ပေါ်လာစေပါတယ်။ သကြားအဆင့်မြင့်မားခြင်းက အရေပြားပျော့တွဲခြင်းကဲ့သို့သော အရေးအကြောင်းတွေရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
glucose တိုးလာခြင်းကြောင့် ကော်လာဂျင်နဲ့ အီလစတင်ရဲ့ပျက်စီးမှုကို ဦးတည်နေသော (သကြားမော်လီကျူးနှင့် ပရိုတိန်းရဲ့ခိုင်မြဲစွာ ဆက်နေခြင်း) glycation လို့ခေါ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်က တချို့အသက်အရွယ်မှာ ရှိသင့်တာထက် မြန်မြန်ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ အီလက်စတစ်အသားအရေက ရေဓါတ်ခန်းခြောက်လာပြီး ပျက်စီးလွယ်လာပါတယ်။
သကြားပိုလျှံမှုကနေ သင့်အသားအရေကို ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲ?
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ သကြားအဆင့်ကို တွက်ဆနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။ အထူးကုနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးနောက်မှာ ကုသမှု စတင်နိုင်ပါတယ်။
အလှကုန်များ- (ဗီတာမင်အေနဲ့ ၎င်းကနေပြုလုပ်တဲ့ ) retinoids ဆီရမ်များ၊ ခရမ်များက ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ဒီအလှကုန်များမှာ ဗီတာမင် စီ၊ ဗီတာမင် အီးနဲ့ လက်ဖက်စိမ်းတို့ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ သူတို့က အင်တီအောက်ဆီဒင့်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီဆိုရင်တောင် နေ့တိုင်း နေရောင်ကာကွယ်ဆေးသုံးပါ- နေရောင်ခြည်က အီလက်စတင် ဖိုင်ဘာများကို ပျက်စီးစေပြီး လျှင်မြန်စွာ အိုမင်းမှုကိုကူညီပေးပါတယ်။